एजेन्सी। सामाजिक संजालमा बेला बेला अनेक खालका फोटो तत्थ भिडियोहरु भाइरल भएका हुन्छन । ति मध्ये कति राम्रो कति शन्देशमुलक हुन्छ भने कति अश्लिल खराब हुन्छ । समाजिक संजालले कै कारणले कतिपय गोप्य तश्विर तथा भिडियोहरु लिक हुने गर्दछ । जसले गर्दा आफ्नो मान, सम्मान र इज्जत पनि बालुवामा पानी खन्याएको जस्तै हुने गर्दछ ।
कुनै पार्क,रेस्टुरेन्ट अथवा जुन सुकै ठाउँमा युवा युवतीबीचहरु घुन्म जानु कसैको नजर तान्दैन । तर उनीहरुले अश्लिल हर्कत गरे भने अवश्य सबैको ध्यान तान्न सक्छ । कतिपयले सार्बजनिक स्थानमै अश्लिल हर्कत गरेको देखिन्छ भने कतिले गोप्य स्थान खोजेर अश्लिल हर्कत गर्ने गर्दछन ।
हालै यस्तै एक जोडीको भिडियो सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भैरहेको छ । उनिहरुले मन्दिर भित्रै यौवनको रश्लिलामा मस्त हुदा भिडियोमा कैद हुन पुगे । एक व्यक्तिले मन्दिर भित्र केहि अस्वाभाविक हर्कत गरिरहेको युवा र युवती देखेपछि भिडियो रेकर्ड गरेर मन्दिर भित्र पसेर के हुदै छ यहाँ भनेर सोधेका छन् । जोडीहरु हतार हतार समालिदै बाहिर निस्केर भाग्न खोजेका छन् । मन्दिर जस्तो ठाउँ पनि छाडेनौ भन्दै उनले सोध्दा केहि पनि भएको छैन भन्दै उनीहरु भागे ।
साबधान ! यी तीन राशि हुनेहरुले सुन लगाउनै हुँदैन ! जान्नुहोस